Cilmi sababay kombiyuutarada dadka si ay u si qarsoodi ah isku dayaan in ay soo booqdaan websites la malaynayo in ay la xakameeyo by dawladaha cadaadis.
Bishii Maarso 2014, cilmi bilaabay Encore, nidaam si ay u bixiyaan-waqtiga dhabta ah iyo cabbirka caalamiga ah ee faafreebka Internet. Si loo fahmo sida ay u shaqeeyeen, aynu u maleynayaa in ku saabsan ee macnaha guud ee aad webpage shakhsiyeed (haddii aadan haysan mid, waxaad qiyaasi kartaa saaxiib aad ee). Mid ka mid ah si ay u malaynayso in aad webpage oo ku saabsan waa sida barnaamij kombiyuutar ku qoran luqad html ka. Marka user ah oo booqday aad website, iyada computer downloads barnaamijka html aad ka dibna u Eebay on iyada shaashadda. Sidaas darteed, aad webpage waa barnaamij waa in ay awoodaan in ay u abaari kombiyuutarada dadka kale inay raacaan nooc gaar ah ee tilmaamaha. Sidaa darteed, cilmi, Sam Burnett iyo Nick Feamster, joogay Georgia Tech, dhiirigelinayaa milkiilayaasha website si loo soo dajiyo snippit a code yar galay shabakadaha ay:
Haddii aad webpage a booqo snippit code waxa in, halkan waxa dhici doona. Iyadoo browser web aad waxaa kala jeexjeexaan webpage ah, snippit code ka dhigi doonaa in aad computer in ay isku dayaan in aad la xiriirto website a in cilmi ayaa isha. Tusaale ahaan, waxa laga yaabaa in website-ka xisbi siyaasiya oo mamnuucay ama koox diimeed silcin jiray. Markaas, your computer ka warbixin doonaa dib u cilmi ah oo ku saabsan in ay ahayd inay awoodaan inay soo xiriir bogga internetka ee laga yaabo inay hor istaagay (Jaantuska 6.2). Dheeraad ah, oo dhan of this noqon lahaa aan la arki karin oo waxay idiin haddii hubiyaa faylka il html aad webpage ah. Codsiyada page dhinac saddexaad la arki karin noocan oo kale ah run ahaantii waa wax caadi ah oo ku saabsan internetka ee (Narayanan and Zevenbergen 2015) , laakiin waxa ay dhif ku lug isku day cad oo ah inay ku qiyaasto faafreebka.
Jaantuska 6.2: Schematic of design cilmi of Encore ah. website asal ahaan waxay kuu soo diro webpage a qoran html la jeex yar code gundhig waxa ku jira (Tallaabada 1). Your computer Eebay webpage ah, kaas oo ku kicin kara hawsha cabbirka (Tallaabada 2). Your computer isku dayaysa in ay helaan diirada lagu qiyaaso, oo waxay noqon kartaa website-ka koox mamnuucay siyaasadeed (Tallaabada 3). faaf A, sida dawlad, markaas xannibi laga yaabaa in ay helaan diirada cabbirka (Tallaabada 4). Ugu dambayntii, aad computer ayaa sheegay in natiijada codsigan baadhayaashu (ma muujiyay shaxanka). Jaantuska ka Burnett and Feamster (2015) .
Habkan ayaa qaar ka mid ah guryaha farsamo aad u soo jiidasho lagu qiyaaso faafreebka. Haddii websites ku filan ku dar snippit code this, ka dibna cilmi yeelan karaan-waqtiga dhabta ah, qiyaas caalami ah oo baaxad ah oo websites waxaa faafreebayso oo dal. Ka hor bilaabay mashruuca, cilmi shirka la IRB ee Georgia Tech, iyo IRB ka gaabsaday inay dib u eegaan mashruuca sababta oo ah waxa aan ahaa "maadooyinka aadanaha cilmi" under Rule Common (Rule Common waa set ee xeerarka ugu maamula dawladda dhexe ay maal-galiso cilmi ee Maraykanka, wixii macluumaad dheeraad ah, eeg Lifaaqa Historical ee dhamaadka cutubkan).
Wax yar ka dib Encore la bilaabay, si kastaba ha ahaatee, cilmi-ka ayaa la soo xidhiidhay Ben Zevenbergen, markaas arday ka qalin ah, kuwaas oo su'aalo ku saabsan anshaxa ee mashruuca la kiciyey. Gaar ahaan, waxaa jiray welwel ah in dadka ku nool dalalka qaarkood loo bandhigi kari waayeen inay halis haddii ay computer ayaa isku dayay in ay soo booqdaan website-yada qaarkood xasaasi ah, oo dadkan oo la loo bandhigi halis uma oggolaan in ay ka qayb daraasaddan. Iyada oo ku saleysan wada hadalka kuwaas oo, kooxda Encore ah modified mashruuca in kaliya isku dayaan inay ku qiyaasto faafreebka ee Facebook, Twitter, iyo YouTube maxaa yeelay-dhinac saddexaad oo isku dayaysa in ay helaan goobahan waa wax caadi ah inta lagu guda jiro dhirta web caadi ah (tusaale ahaan, webpage kasta oo leh Button Facebook Like dhaliya codsi dhinac saddexaad in Facebook).
Ka dib markii ururinta xogta la isticmaalayo design this modified, warqad ah ku tilmaamay habka iyo natiijooyinka qaar ka mid ah ayaa waxaa loo gudbiyay SIGCOMM, shir computer science qiimaha. guddiga barnaamijka The mahad qayb farsamo ee warqada, laakiin walaac ku saabsan la'aanta ah ee oggolaansho la wargeliyey ka qayb-galayaasha ka muujiyay. Ugu dambayntii, gudiga barnaamijka go'aansadeen in ay daabacaan warqada, laakiin war saxiix muujiyey walaac anshaxa (Burnett and Feamster 2015) . Kaasi war saxiix weligeed ninna la dhigin ka hor at SIGCOMM, iyo haddii ay taasi keentay in dood dheeraad ah by saynisyahano computer ah oo ku saabsan nooca anshaxa in ay cilmi-baarista (Narayanan and Zevenbergen 2015) .